विशेष Archives | Kendrabindu Nepal Online News
‘संसद सांसदहरुको स्थायी जागिर होइन’ : प्रधानमन्त्री ओली (भिडियोसहित)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरु देशविरोधी भएको बताएका छन् । आइतबार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समस्या र सवालमा अपाङ्गतासँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंगठनहरुले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेर कराउनेहरु देशविरोधी भएको
१२ माघ २०७७, सोमबार ०९:१०	१२ माघ २०७७, सोमबार ०९:१०
प्रचण्ड–नेपाल पक्ष : ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरि कारबाही (भिडियोसहित)
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरि हटाएको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरि कारबाही गरेको हो । बैठकपछि
१२ माघ २०७७, सोमबार ०८:४३	१२ माघ २०७७, सोमबार ०८:४३
फागुनमा काठमाडौं आइपुग्दै मेलम्ची ! (भिडियोसहित)
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापाले आइतबार मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत सुन्दरीजल क्षेत्रको सुरुङमार्गको अवलोकन गरेका छन् । अवलोकनका क्रममा मन्त्री थापाले सुरुङमार्गको काम सन्तोषजनक रहेको बताए । उनले सुरुङ निर्माणको काम प्राविधिक रुपले सफलतातर्फ गइरहेको अनुभूत भएको दावी गरे ।
१२ माघ २०७७, सोमबार ०६:२८	१२ माघ २०७७, सोमबार ०६:२८
स्वास्थ्य विशेष : ढल्किदो उमेरसँगै खानपानको ख्याल कसरी गर्ने ? (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । हाम्रा धर्मशास्त्रहरुमा उल्लेख छ, अल्पहारी हुनुपर्छ । अर्थात धेरै खानेकुरा खाने मानिस रोगी र चाँडो बुढो हुन्छ । यो तथ्य विज्ञानले समेत पुष्टि गरिसकेको छ । यसको निष्कर्ष शारीरिक स्वास्थ्यका लागि खाना अनिवार्य आवश्यकता हो । तर, त्यही
११ माघ २०७७, आईतवार ०८:३८	११ माघ २०७७, आईतवार ०८:३८
« Previous Page1 Page2 Page3 … Page372 Next »